#Omar Iyo Qoyskeeda Oo Ilaalo Khaas Ah Loo Samaynayo, Kadib Weerarkii Trump - Get Latest News From Horn of Africa
#Omar Iyo Qoyskeeda Oo Ilaalo Khaas Ah Loo Samaynayo, Kadib Weerarkii Trump
By WARIYAHA CAALAMKA On Apr 15, 2019
Afhayeenadda Aqalka Wakiilladda (Senedka) ee dalka Maraykanka, Nancy Pelosi ayaa sheegtay inay Sarkaalka dhinaca Ammaanka ee Aqalkaasi kala hadashay Ammaanka Seantor Ilhan Omar iyo in ilaalo khaas ah loo sameeyo.
Hadal-qoraal oo ay soo saartay Nancy Pelosi waxay kaloo ku sheegtay inay doonayso inay Ciiddanka Boliska ee Capitol (USCP) ee u xil-saaran ilaalinta Ammaanka Xildhibaanadda dalkaasi inay Ilaalo Khaas ah u sameeyaan Ilhaan Cumar, Qoyskeeda iyo shaqaalaheeda.
“Waxay Ciiddankaasi sii wadi doonaan inay ilaaleeyaan iyo inay sheegeen Cabsida soo wajihi karta Ilhaan Cumar” ayey tiri Afhayenadda Aqalka Wakiiladda ee Maraykanka.
Nancy Pelosi waxay kaloo qoraalkeeda ku sheegtay in hadallada Madaxweyne Trump lagu miisaami karo Hal Tan iyo inay nacaybkiisa ay abuuri karaan Khatar Xaqiiqo ah.
“Madaxweyne Trump waxaa waajib kuugu ah inaad hoos u dhigto Ixtiraam la’aantaada dadka kale iyo Muuqaalladda Video-ga ee Khatarta leh” ayey Afhayeenadda Aqalka Senedka Maraykanka si tooska ah ugu sheegtay Madaxweyne Trump.
Trump waxaa uu durbadiiba ka saaray Twitter-kiisa qoraalkii Eedeynta ee ka dhnaka ahaa Ilhaan Cumar.
Dhinaca kale, Xildhibaanad Ilhaan Cumar waxay Axaddii shalay shaacisay inay kordheen farriimaha loogu hanjabayo in iyada la dili doono, tan iyo markii uu Madaxweyne Trump soo tweet-gareeyey qoraal iyo Muuqaal Video ah oo la isku soo habeeyey, kaasi oo uu ku eedeyey Xilhibaanadaasi Somali-Maraykanka ah.
“Tan iyo markii uu Madaxweyne Trump fiidnimadii Jimcihii soo dhigay Bartiisa Twitterka, waxaa kordhay cabsi-gelinta tooska ee Nolosheyda, iyadoo Farriimahaasi badankooda tixraac iyo jawaab u ahaayeen Muuqaalkii Video-ga ee Madaxweynaha soo tweet-gareeyey” ayey tiri Ilhaan Cumar.
Waxay intaasi ku dartay inay u mahadcelinayso The Capitol Police, Hay’adda Dembi-baarista Federalka ee FBI-da, Madaxa Ammaanka ee Aqalka Senedka iyo Afhayeenadda Aqalkaasi ee dareenka ay ka bixiyeen cabsi-gelintaasi.
Ma aha markii ugu horreysay ee Ilhaan Cumar la kulanto Hanjabaadyo, iyadoo ay Hay’adda FBI-da bishan April 5-dii dacwad ku soo oogtay nin deggan magaalladda New York , kaasi oo ku hanjabay inuu dili doono Ilhaan Cumar.
Ninkaasi ayaa la sheegay inuu hanjabadaasi ku sheegay, xilli uu Telefoon u diray Xafiiskeeda oo ku yaalla magaalladda New York.
Si kastaba ha ahaatee, Ilhaan Cumar waxay sheegtay inay soo wajaheen tiro cabsi-gelin ah, tan iyo markii la doortay Doorashadii Xilliga Dhexe ee Maraykanka ka dhacday sannadkii hore.
1 day ago 963,341